January 2021 - MM Daily Life
သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက် သတိရနေပြီဆိုတာ သေချာနေတဲ့ “နိမိတ်”ခံစားချက်များ…
January 31, 2021 by MM Daily Life
သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက် သတိရနေပြီဆိုတာ သေချာနေတဲ့ “နိမိတ်”ခံစားချက်များ… စာမမှနျပါက အောကျတှငျ Unicode Version ဖွငျ့ဖတျရနျ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို သတိရနေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုနမိတ်တွေဖြစ်လာလဲ သင်သိပါသလား… တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဆိုတာ သိပ်ကို ဆန်းကျယ်ပါတယ် …။ စိတ်စွမ်းအင်ဆိုတာလည်း မယုံမရှိပါနဲ့။ ဒါဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို အရမ်းပဲ သတိရနေ၊ လွမ်းနေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာတတ်သလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …။ သင့်မျက်နှာကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပြုံးသွားမယ်… အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီဒီယိုကောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ တင်ကို သူ့မျက်နှာလေးမှာ နှုတ်လမ်းလေးကွေးပြီး ပြုံးသွားမယ် ဆိုရင်တော့ သူဒီရက်ပိုင်း အတွင်း သင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေတာ သေချာနေပါပြီ . . .။ သင်သူ့အကြောင်း အိပ်မက်ထဲ … Read more
ရိုးသားမှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ သူတွေသိထားသင့်တဲ့ အားနည်းချက်လေးများ…
ရိုးသားမှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ သူတွေသိထားသင့်တဲ့ အားနည်းချက်လေးများ… စာမမှနျပါက အောကျတှငျ Unicode Version ဖွငျ့ဖတျရနျ ရိုးသားမှုဆိုတာ အလွန်တရာတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဂုဏ်တစ်ခုပါပဲ။ ရိုးသားမူကို ဘာနဲ့မှ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ ရိုးသားမှုဆိုတာ လူတိုင်းမှာ မတွေ့နိုင်လို့ ရိုးသားသူတွေဟာ တန်ဖိုးထား၊လေးစားစရာ အရမ်း ကောင်းလွန်းပါတယ် …။ သို့သော်လည်းပဲ လောကမှာ အဆိုးနဲ့အကောင်း ဒွန်တွဲနေတာကြောင့် ရိုးသားတာကလည်းဘဲ အားနည်းချက်တစ်ခုလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် …။ ရိုးသားမှုကို အမြဲထားလို့ ဘယ်လို အားနည်းချက်တွေ ဖြစ်သွားတတ်လဲ ဆိုရင်… (၁) အလိမ်ခံရမယ်” ရိုးသားတဲ့သူတွေရဲ့ အကျင့်က အမြဲတမ်း စိတ်ခံအတိုင်း တွေးတတ်ကြတာပါ။ တခြားသူတွေကိုလည်း ကိုယ့်လို ရိုးသားမယ် ထင်ပြီး သူတို့ ဟန်ဆောင်တာတောင် မရိပ်မိတတ်ကြပါဘူး …။ အရှိကို အရှိအတိုင်း အဖြောင့်အတိုင်း … Read more
ယောကျာ်းလေးတွေ ရူးရူးမူးမူးချစ်မိပြီး အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ရင်….
ယောကျာ်းလေးတွေ ရူးရူးမူးမူးချစ်မိပြီး အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ရင်…. စာမမှနျပါက အောကျတှငျ Unicode Verson ဖွငျ့ဖတျရနျ တစ်ချို့သောနေရာတွေမှာ ယောကျာ်းလေးတွေက မိန်းကလေးတွေထက်တောင် ပိုပြီးကြောက်တတ်နေပါသေးတယ်။ ဥပမာ – သူတို့ တကယ်ချစ်မိသွားပြီး ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာကို အရမ်းကြောက်တတ် ကြတာမျိုးပေါ့။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အရူးအမူး ချစ်မိပြီး ဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ သူတို့ဆီမှာ ဒီလိုအချက်တွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်နော် …။ သူတို့ကို သူတို့ပြောင်းလဲလာတတ်တယ်” ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သူမျိုးကိုဆို လုံးဝမကြိုက်တတ်ကြသလို ဘယ်တော့မှလည်း မပြောင်းလဲပေးတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တကယ် ချစ်တဲ့သူ၊ တကယ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ သူအတွက်တော့ သူတို့ရဲ့ ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ရမှာကို လုံးဝမတွန့်တိုတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့အရမ်းချစ်မိတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် သူတို့ရဲ့ ပုံစံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်လာကြပါတယ် …။ … Read more
အရင်ဆုံး လက်လွှတ်ပေးမယ့် မိန်းမတစ်ယောက် ရဲ့ မာနလေးတော့ထားတယ်
အရင်ဆုံး လက်လွှတ်ပေးမယ့် မိန်းမတစ်ယောက် ရဲ့ မာနလေးတော့ထားတယ် မနေချင်တဲ့သူကို ဆွဲထားလောက်တဲ့အထိ ကျွန်မ မာနတွေ မမဲ့ချင်ဘူး … ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ … ပျော်လာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးထားခဲ့တာပဲရှိတာပါ ။ တကယ်တမ်း ကိုယ့်အနားမနေချင်တော့မှန်းသိရင် … ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် ကျွန်မ ဆွဲထားမနေတော့ပါဘူး ။ ကိုယ်က ဆွဲထားလို့သာ မြဲနေရတယ်ဆိုတာ … မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မာနကို သိပ်ထိခိုက်တယ် ။ အချစ်မှာ မာနတွေ သံသယတွေ မလိုဘူးတဲ့ ။ ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်ဟန်ကိုယ်ဖို့တတ်တဲ့ လက်ကျန်မာနလေးထားတယ် ။ ရင်တွေ ကွဲထွက်သွားပါစေ … ရင်ကွဲခံမယ် ။ တစ်သက်လုံး မျက်ရည်တွေ နောင်တတွေနဲ့တော့ ကျွန်မ မဖြတ်သန်းချင်ဘူး ။ တန်ဖိုးမထားတတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ တန်ဖိုးမဲ့နေသလို ဘ၀မျိုးနဲ့နေဖို့အထိ … Read more
လူတွေသတိမထားမိတဲ့ နည်းလမ်းဖြင့် ဆားရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ (၁၄)မျိုး
လူတွေသတိမထားမိတဲ့ နည်းလမ်းဖြင့် ဆားရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ (၁၄)မျိုး ဆားကို နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ကျော်လောက်ထဲက ကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အစားအစာတွေ ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် အစားအစာအမျိုးမျိုးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်၊ မီးလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ လျော့ချဖို့အတွက် စတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အစားအစာတွေကို ဘာ့ကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆားက နေရာတိုင်းနီးပါးရနိုင်ပြီး ဈေးပေါပါတယ်။ ဆားကို ဒီထက်ပိုပြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရသေးသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ အဝတ်ဟောင်းတွေကို အရောင်ပြန်တင်တဲ့အခါ အရောင်လွှင့်နေတဲ့ အဝတ်ဟောင်းတွေကို အသစ်လိုတောက်ပသွားအောင် ဆားနဲ့ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆား ၄ပုံ၁ပုံထည့်ထားတဲ့ ဆားရည်တစ်ခွက်ထဲမှာ သင်အဝတ်တွေကို စိမ်ပါ။ လျှော်ပြီးသွားရင် ရလဒ်တွေက အံသြစရာဖြစ်လာမှာပါ။ ၂။ ပန်းတုတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ပလတ်စတစ်အလှပန်းတွေက ကြာကြာထားရင် ဖုန်တွေတတ်လာတတ်ပါတယ်။ … Read more
ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု(၈)မျိုး…
January 29, 2021 by MM Daily Life
အိပ်မက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ ၁။ သင့်အိပ်မက်၏ ၉၀% သည် သင်နိုးလျှင် မေ့သွားတတ်သည်။ အိပ်ရာနိုးပြီး ၅ မိနစ်အတွင်းတွင် အိပ်မက် တစ်ဝက်လောက်ကို မေ့သွားတတ်ပြီး၊ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာလျှင်တော့ ၉၀% လောက်ကို မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ၂။ မျက်စိမမြင်သူများလည်း အိပ်မက် မက်ကြသည်။ လူများသည် မျက်စိမြင်သောအခါမှ အပြင်မှာမြင်သော အရာများကို အိပ်မက်ထဲ ထည့်မက်ကြသည်ဟု ထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော် မွေးကတည်းက မျက်စိမမြင်သော သူပင်လျှင် အိပ်မက် မက်တတ်ကြသည်။ ၄င်းတို့ အိပ်မက်ထဲတွင် သူတို့ရင်းနှီးသော အသံ၊ အနံ့၊ အထိအတွေ့ နှင့် ခံစားချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။ ၃။ လူတိုင်း အိပ်မက် မက်ကြသည်။ ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး သွပ်သွပ်ခါအောင် ရူးနေသူများမှလွဲပြီး ကျန်တဲ့ လူသားတိုင်း အိပ်မက် … Read more
ခန္ဓာကိုယ်က မဝပေမယ့် ဗိုက်မှာပဲ အမြဲ ကွက်ကိတ်နေတဲ့ ပျိုပျိုမေတွေ ဖတ်ဖို့…
ခန္ဓာကိုယ်က မဝပေမယ့် ဗိုက်မှာပဲ အမြဲ ကွက်ကိတ်နေတဲ့ ပျိုပျိုမေတွေ ဖတ်ဖို့… အဆီပိုတွေဆိုတာ ကြည့်မကောင်းသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ စားသလောက် မဝတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရှိသလို လေရှူတာတောင် ဝနေပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီ မရှိဘဲ ဗိုက်လေးပဲ ကွက်အဆီစုပြီး ပူထွက်နေတာမျိုးပါ။ ဒီလိုမျိုး ဗိုက်မှာပဲ အဆီစုပြီး ပူနေတာက ကြည့်ရ အရမ်းဆိုးတာကြောင့် ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းများ ဗိုက်မှာ အဆီတွေ များတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲမှာ အစားစားပြီးတိုင်း လှဲအိပ်နေမိတာမျိုး၊ လှုပ်ရှားမှု မရှိတာမျိုးတွေကြောင့် ဖြစ်သလို အထိုင်များတဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်ရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေချာတဲ့အချက်ကတော့ အဆီချေဖျက်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု မရှိလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားရမယ့် … Read more
သင့်ရဲ့အချစ်တွေကို ချစ်သူကဘယ်လောက်အထိ တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်မယ့်အချက်များ…
သင့်ရဲ့အချစ်တွေကို ချစ်သူကဘယ်လောက်အထိ တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်မယ့်အချက်များ… စာမမှနျပါက အောကျတှငျ Unicode Version ဖွငျ့ဖတျရနျ ကိုယ့်ကို ချစ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကို ချစ်သူကတန်ဖိုးထားတာကို မိန်းကလေးတိုင်း မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကပေးလိုက်တဲ့ အချစ်တွေကို သူ့ဖက်က တကယ်ပဲ တန်ဖိုးထားရဲ့လားဆိုတာ တိုင်းတာဖို့အတွက်ကတော့ ခက်ခဲပါတယ် …။ တကယ်လို့ ယခုလိုအချက်တွေသာ သင့်ရဲ့ချစ်သူဆီမှာ မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင် သင့်ကိုသူဘယ်လောက်ထိ မြတ်မြတ်နိုးနိုး တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိရှိနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော် …။ ၁။ ဒီကမ္ဘာပေါ်က အခြားယောက်ျားတွေနဲ့ မတူတဲ့အကြည့်နဲ့ သင့်ကိုကြည့်တတ်တယ်” မျက်လုံးဟာ နှလုံးသားရဲ့တံခါးပေါက်တချပ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ် ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေတဆင့် ရှာဖွေ့ဖို့ကို အကြံပြုပေးပါတယ် …။ သူသင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါတိုင်း သင့်ရဲ့နှလုံးသားက ဖော်မပြတတ်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်တွေကို အလိုလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် … Read more
29.1.2021 မှ 04.2.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ (၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း…
January 28, 2021 by MM Daily Life
29.1.2021 မှ 04.2.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ (၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း… စာမမှနျပါက အောကျတှငျ Unicode Version ဖွငျ့ဖတျရနျ တနင်္ဂနွေ” ယခုကာလများအတွင်း ခရီးသွားအလုပ်၊ ကုန်သည်အလုပ်များ အထူးအကျိုးရှိမည်။ လူမျိုးကွဲ၊ လူမျိုးခြား များ နှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးပေးမည်။ လက်လွန်ထားသောငွေကြေးများ ပြန်လည်တောင်းခံ ရရှိလိမ့်မည် …။ ကိုယ်တိုင်တွင် လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း ပြည်ပခရီးများ ရှိနေမည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဆက်စပ်သော ခရီးများ သွား လာရတတ်သည်။ ခက်ခဲသော ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည် …။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေလည်း လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေ ရရှိနိုင်သည် …။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေရင်း တွေရဲ့ ရာထူးတတ်တဲ့သတင်း၊ ထီဆုကြီးပေါက်တဲ့သတင်း စသည်ဖြင့် ဝမ်းသာစရာများ … Read more